Dhawunirodha WhatsApp ye iPad, pasina kukosha kweJailbreak | IPhone nhau
Iyo iPad ichiri nhasi bhenji kana zvasvika pamahwendefa saka zvakajairika kuti iwe unoda kurodha pasi Whatsapp yePadad. Iyo hombe skrini yeiyo iPad yakave yakakurumbira sefuro, ichive yakakurumbira uye inotengesa zvakanyanya piritsi pamusika.
Zvingave sei zvisina kudaro, piritsi rakakurumbira rinofanira kukwanisa kuve nemeseji inonyanya kufarirwa, asi hazvisi zvese zvinoyevedza sezvavanopenda, uye kushandisa WhatsApp kwePadad kunogona kutipa zvakanyanya kutemwa nemusoro. Neraki, zvinhu zvachinja zvakanyanya uye zviri kuve nyore uye nyore. shandisa WhatsApp paPadad.
Ichi chi inoshanda kune iPad WiFi kana iyo modhi ine 4G (cellular) kunyangwe mune yekutanga kesi, iwe uchafanirwa kuve nehukama neWiFi isina waya netiweki kuti ugone kubatanidza kuWhatsApp paPadad panguva yechipiri, sezvo isu tine LTE yekubatanidza tinogona kushandisa WhatsApp neese sarudzo.
1 Dhawunirodha WhatsApp yePadad
2 Isa WhatsApp yePadad isina Jailbreak
Dhawunirodha WhatsApp yePadad
Pakutanga, zvaive zvisingaite kupedzisa kuisa WhatsApp pane iyo iPad Pasina kuenda kuburikidza neakakurumbira ejeri kupwanya nzira, isu tinoreva kugura chishandiso chedu kuisa mashandiro izvo zvingadai zvisingaite kutamba pane iyo iPad.
Nekudaro, kusvika kweWhatsApp Web kwakavhura seti nyowani yemikana yevagadziri, nekudaro kugona kuisa zviri pamutemo uye zvine mutsindo WhatsApp pane iPad pane zvisarudzo zvakakodzera iyo Retina Ratidza. Nekudaro, maapplication akadai se "Messenger for iPad" akabuda, chishandiso chinowanikwa muApp Store icho chatakakwanisa kurodha WhatsApp yeAppad.
Isa WhatsApp yePadad isina Jailbreak
Saka tinogona kunyatsokanganwa nezveJailbreak, WhatsApp Web yakabvumidza vanogadzira kuti vashande pazvishandiso zvizere zviri pamutemo uye zvinoshanda paIpad, kuti tikwanise kuisa WhatsApp pane iPad yemahara pasina zvinetswa, isu tinongofanirwa kuenda kuApp App Store kubva kuIpad, uye tinotora download senge "Messenger for iPad" yatinokurudzira pamusoro, chero zvakadaro, nekutsvaga kuri nyore kwe "WhatsApp" muApp Store, isu tichawana emahara mafomu ekushandisa ayo anoshanda zvakafanana basa. Kurodha pasi WhatsApp paPadad hakuna kumbove kuri nyore